ကလေး - OnDoctor
OnDoctor - The Gretest Gift - The Greatest Gift
Wai Yan Lin	 Nov 21, 2017
ကလေးတွေ ဒေါသထွက်ရင် ကလေးမိဘတွေက သူတို့ထက် အပြိုင်အဆိုင် ဒေါသပိုထွက်ကြတယ်။ ဒါကိုအချို့မိဘတွေက မှန်တယ်ထင်ကြတယ်။ ကလေးက စိတ်ဆိုးနေတယ်။ မအိပ်ချင်ပဲ အိပ်ခိုင်း၊ ဆော့နေတာ ဖုန်းကနေ “ဂိမ်း” ဆော့တာ စိတ်မပါပဲ အပိတ်ခံရတာတွေ၊ ကလေးက…
Dr. Thet Aung	 Nov 16, 2017
ရေကျောက်ကို အင်္ဂလိပ်လို Chicken Pox လို့ ခေါ်ပါတယ်။ ရေကျောက်ဟာ Varicella Zoster ခေါ် Human Herpes Virus3ဆိုတဲ့ ဒီအင်အေ ဗိုင်းရပ်စ်ပိုး ဝင်လို့ ဖြစ်ရတာပါ။ ဘယ်လိုကနေ ပိုးဝင်နိုင်လည်းဆိုတော့ လေထဲကနေတဆင့် (ဥပမာ ချောင်းဆိုး…
ကလေးတွေမှာ အနားယူဖို့ အချိန်ရှိသင့်တယ်
Wai Yan Lin	 Sep 14, 2017
ဖိစီးမှုဆိုတာ လူမှုဘဝနေမှုနဲ့ အနက်တူပြီး ကလေးတွေတောင် ခံနိုင်ရည်မရှိကြပေ။ အလွန်သွက်နေတဲ့ လူမှုဘဝမှာ ပြိုင်ဆိုင်မှုတွေဟာ အလွန်များပါတယ်။ အဲဒီ အတွေ့အကြုံရှိမှုအပေါ် ကလေးတွေ ဖိစီးမှုအဆင့်မြင့်မြင့်တွေကို စောစောနားလည်လာကြတယ်။ ကလေးတွေမှာ…
Dr. Thet Aung	 Aug 17, 2017
ဝမ်းလျှောခြင်းဆိုသည်မှာ ၂၄နာရီ တစ်ရက် အတွင်းမှာ အရည်ဝမ်းများ ၃ကြိမ်နဲ့အထက် သွားခြင်းလို့ ဆေးစာအုပ်မှာ သတ်မှတ်ထားပါတယ်။ ဝမ်းအမာများ ခဏခဏသွားခြင်းကို ဝမ်းလျှောခြင်းလို့မသတ်မှတ်ပါ။ကလေးတစ်ယောက်ဝမ်းလျှောပါက ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ။ပထမဆုံး…
Dr. Pyae Shin	 Aug 17, 2017
ကလေးငယ်ဟာ ရက်အတန်အကြာဝမ်းမသွားခဲ့လျှင်တော့ ဝမ်းချုပ်တယ်လို့ သတ်မှတ်ရပါမယ်။ ဝမ်းချုပ်ခြင်းဟာ အကြိမ်ရေတစ်ခုပဲ ကြည့်ပြီးသတ်မှတ်လို့ မရပါဘူး။ ကလေးငယ်ဟာ ဝမ်းအမာသွားရခြင်းကြောင့် စအိုဝပွန်းရျ် ဝမ်းနဲ့အတူသွေးစကလေးများ ပါတတ်ပါတယ်။ ကလေးငယ်ဟာ…
Dr. Aye Chan Moe	 Jul 27, 2017
စုလေးတစ်ယောက် လင်းကြက်တွန်သံကြောင့် အိပ်ယာမှ နိုးလာခဲ့သည်။ အရင်တုန်းကဆိုလျှင်တော့ မထသေးပဲ ပတ်ဝန်းကျင်မှ အသံများကို နားထောင်ကာ အိပ်ယာထက်တွင် လူးလိမ့်နေမည်ဖြစ်သည်။ အခုတော့ ဘေးတွင် အိပ်နေသော သားကို စမ်းကြည့်လိုက်သည်။ သားက နှစ်ခြိုက်စွာ…
သွားရည် တမြမြ ဘာကြောင့် ဖြစ်ရတယ်
Khit Thit Ziwaka	 Jul 9, 2017
မိုးလေးဖွဲဖွဲနဲ့ အချမ်းပိုသော တစ်နေ့သော ညနေခင်းတွင် မလာတာကြာပြီဖြစ်တဲ့ဝတ်ဆန် တစ်ယောက် လသားကလေး ချီထားတဲ့ ကလေးအမေတစ်ယောက်နဲ့ အသော့ကလေးပေါက်ချလာတယ် ။ဝတ်ဆန် ။ ။ ဆရာရေ မတွေ့တာကြာပေါ့ ။ဇီဝက ။ ။ အေး ၊ညည်းက ဘယ်ပျောက်နေတာတုန်း…
Dr. CST	 May 17, 2017
ကလေးငယ်လေးတွေမှာလည်း မွေးစအရွယ်တည်းကတက်တာတွေ ရှိတတ်ကြတယ် ။ဖျားလို့တက်တာလည်းရှိတယ် မဖျားဘဲတက်တာလည်းရှိတယ်။ သူတို့လေးတွေ စကားမပြောနိုင်ကြသေးခင်မှာ တက်တာကသိသိသာသာတက်နေတာဆို လူကြီးတွေကသိနိုင်ပေမယ့် တချို့ကလေးတွေကျတော့ ဖျားလည်းမဖျား…
သင့်ကလေးက ဝနေတာလား? ဖောနေတာလား?
OnDoctor Editor	 Apr 27, 2017
အမေတွေဟာ မိမိကလေးဝနေတယ်လို့ထင်နေတတ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် တစ်ခါတစ်လေမှာ ကျောက်ကပ်မကောင်းလို့ ဖောနေတာမျိုးဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ကလေးတွေမှာ အဖြစ်များတဲ့ ကျောက်ကပ်ရောဂါထဲကတစ်ခုကတော့ Nephrotic syndrome ပဲဖြစ်ပါတယ်။Nephrotic syndrome ဆိုတာဘာလဲ Nephrotic…
OnDoctor Editor	 Apr 26, 2017
ကလေးဘဝကာကွယ်ဆေးဆိုတာ ကလေးအရွယ်ခုခံအား မပြည့်စုံသေးတဲ့နုနယ်နေစဉ် ပုံမှန်ထိုးနေကျ ကာကွယ်ဆေးတွေဆိုလိုရင်းဖြစ်တယ်။ ယခင်က ဆေးသုံးမျိုးပါကာကွယ်ဆေးသုံးခဲ့ပါတယ်။ ကြက်ညှာ၊ ဆုံဆို့ နှင့်မေးခိုင်ကာကွယ်ဆေးသုံးမျိုးဖြစ်တယ်။ အသည်းရောင်ဘီကာကွယ်ဆေးအပြင်…
ကလေးမွေးပြီး၊ မီးတွင်းကာလကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်ခြင်း
လိင်အင်္ဂါမှာ ပေါက်တဲ့ အဖု
OnDoctor © 2017 - All Rights Reserved.
OnDoctor App ကိုဒေါင်းလုဒ်ရယူပြီး ဆရာဝန်နှင့် အခမဲ့တိုင်ပင်လိုက်ပါ